people Nepal » कसले हान्यो दावालाई गोली ? कसले हान्यो दावालाई गोली ? – people Nepal
कसले हान्यो दावालाई गोली ?
Posted on April 12, 2017 by Durga Panta
३० चैत, काठमाडौं । गौरीघाटस्थित बागमती नदी किनारामा रहेको दिव्य पार्टी प्यालेसमा गोली लागेर ‘कहलिएका गुन्डा’ दावा लामा मंगलबार घाइते भए । घटनाबारे प्रहरीले फेला पारेको ‘क्लोज सर्किट’ टेलिभिजन दृश्यमा हाफ पाइन्ट र चप्पलमा रहेका दावा ब्याग बोकेर दक्षिणतिरको बाटो हुँदै पार्टी प्यालेसमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
उनले बाटो क्रस गरेलगत्तै दक्षिणतिरबाटै सेतो मास्क लगाएका झोला बोकेका अर्का व्यक्ति उनको पछाडि देखिन्छन् । दावा ढोका नजिक पुगेपछि उनी हतारहतार नजिक आउँछन् र दावा गेटभित्र प्रवेश गरेलगत्तै पेस्तोल निकालेर फायर गर्छन् । सुटरले लगातार दुई राउन्ड गोली हानेपछि दावा पार्टी प्यालेसको कम्पाउन्डमा ढल्छन् र सुटर पश्चिमतिर भाग्छन् ।
लामो समय दावाको दैनिकी निगरानी गरेर गोली हान्ने योजना बनेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
पहिलो गोली शरीरको माथिल्लो भागमा हान्दा छलेर दावा भाग्न सक्ने भन्दै सुटरले गोडामा गोली हानेर शरीरका अन्य भागमा हानेको देखिन्छ । प्रहरीले गोली कसले हान्यो भनेर अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर, गोली हान्नेबित्तिकै ‘म हङकङबाट लोप्साई राई बोलेको, दावा लामालाई मैले गोली हान्न लगाएको हुँ’ भनेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशीलाई फोनबाट सुटरले जानकारी दिएका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
कोरोनाको तेस्रो लहरले यसरी बालबालिकालाई जोखिममा पार्दैछ
स्मार्ट लकडाउन हुँदै